Annihilation (2018) – Channel Myanmar
လူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာလား၊ ကိုယ့်စိတ်ကတွန်းအားပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်နေကြတာလား?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတာ တူသလား?
လီနာ့ယောက်ျား စစ်မစ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။
ဘာမစ်ရှင်လဲ၊ ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့လဲဆိုတာ လီနာကိုယ်တိုင်တောင်မသိရပါဘူး။
လီနာကတော့ သူ့ယောက်ျားသေသွားပြီလို့ပဲ မှတ်ယူထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ သူ့ယောက်ျား အမှတ်မထင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရောက်လာတာလဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိတဲ့အခြေအနေ၊
ရုတ်တရက်ကြီး သွေးတွေအန်ကျလာလို့ ဆေးရုံကိုအပြေး၊ လမ်းမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က လီနာနဲ့ သူ့ယောက်ျားကို ၀င်ဖမ်းသွားပါတော့တယ်။
လီနာ ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရှေ့မှာ အမိုးခုံးကြီးတစ်ခု၊ သာမန်ထက်ပိုထူးခြားတဲ့ Dimension တစ်ခုကို တွေ့လိုက်တယ်။
အဲ့အမိုးခုံးထဲဝင်သွားသမျှ အရာအားလုံး ဘာမှပြန်ထွက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူး။
လီနာရဲ့ယောက်ျားကလဲ ဒီအမိုးခုံးထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီး အသက်ငင်ငင်နဲ့ပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့မှန်း သူသိလိုက်ပါတယ်။
အမိုးခုံးကြီး ပိုပိုကြီးမားလာတာနဲ့အမျှ လူသားတွေအတွက် အန္တရာယ်ပိုရှိလာမှန်း သိလာတဲ့အခါ လီနာနဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ချို့ဟာ ဒီအမိုးခုံးထဲကို ၀င်ပြီး အထဲကအဖြစ်အပျက်တွေကို သွားလေ့လာပါတော့တယ်။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့ ဆဲလ်တွေ၊ အပင်တွေ၊ ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဒီ Dimension ကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေကို ထင်ဟပ်ပြနေသလို အပေါ်ဆုံးက မေးခွန်းတွေအတိုင်းပဲ ဇာတ်လမ်းကိုတည်ဆောက်ပြသွားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ဗီလိန်လဲမပါသလို လူကောင်းလဲမပါပါဘူး။
သိပ္ပံအက်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ဆင်ပေမယ့်လဲ တကယ်တော့ Symbollism တွေ သေချာသုံးပြထားတဲ့၊ဇာတ်လမ်းတစ်ကွက် လွတ်သွားရင် ဇာတ်ရည်လည်ဖို့ခက်သွားနိုင်တဲ့ Arthouse ဆန်ဆန်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားလို့ပြောရင် မလွန်လောက်ပါဘူး။
လီနာရဲ့ Relationship အခြေအနေ၊ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို စကားပြောထက် အမူအရာတွေနဲ့ပဲ ပုံဖော်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ ဇာတ်လမ်းကို အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ ပြောသမျှစကား၊ လုပ်သမျှအပြုအမူတိုင်းကို သေချာအာရုံစိုက် ကြည့်မှသာ ဇာတ်လမ်းရဲ့အနှစ်ကို ရနိုင်တဲ့ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားကို နားလည်သွားတာဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီး ကဗျာဆရာရဲ့ပေးချင်တဲ့ Message ကို သိသွားတာနဲ့ တူပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာ နေ့စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သူတိုင်း၊ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူတိုင်း၊ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတိုင်း ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီးရင် အဆုံးသတ်မှာစိတ်ထဲ တစ်ခုခုတော့ ကျန်ရစ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။
Imdb 7.7 နဲ့ Rotten Tomatoes 87% ရရှိထားပြီး Star Wars fan တို့ရဲ့အချစ်တော် Natalie Portman, Thor: Ragnarok ကားထဲက Valkyrie အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Tessa Thompson နဲ့အတူ Oscar Issac တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဒီကားကြည့်ပြီး ဂိသထက် ဂိနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ ကွီးအာကာပါ)
လူတှကေ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေတြာလား၊ ကိုယျ့စိတျကတှနျးအားပေးတဲ့အတိုငျး လိုကျလုပျနကွေတာလား?
ကိုယျ့ကိုယျကိုသကွေောငျးကွံတာနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုဖကျြဆီးတာ တူသလား?
လီနာ့ယောကျြား စဈမဈရှငျရှိတယျဆိုပွီး ထှကျသှားတာ တဈနှဈရှိပါပွီ။
ဘာမဈရှငျလဲ၊ ဘယျကိုသှားရမှာလဲ၊ ဘယျသူတှနေဲ့လဲဆိုတာ လီနာကိုယျတိုငျတောငျမသိရပါဘူး။
လီနာကတော့ သူ့ယောကျြားသသှေားပွီလို့ပဲ မှတျယူထားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တဈနမှေ့ာ သူ့ယောကျြား အမှတျမထငျပွနျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
အိမျကိုဘယျလိုပွနျရောကျလာတာလဲဆိုတာ သူကိုယျတိုငျတောငျ မသိတဲ့အခွအေနေ၊
ရုတျတရကျကွီး သှေးတှအေနျကလြာလို့ ဆေးရုံကိုအပွေး၊ လမျးမှာ ရဲတပျဖှဲ့တဈဖှဲ့က လီနာနဲ့ သူ့ယောကျြားကို ဝငျဖမျးသှားပါတော့တယျ။
လီနာ ပွနျနိုးလာတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ရှမှေ့ာ အမိုးခုံးကွီးတဈခု၊ သာမနျထကျပိုထူးခွားတဲ့ Dimension တဈခုကို တှလေို့ကျတယျ။
အဲ့အမိုးခုံးထဲဝငျသှားသမြှ အရာအားလုံး ဘာမှပွနျထှကျမလာနိုငျခဲ့ဘူး။
လီနာရဲ့ယောကျြားကလဲ ဒီအမိုးခုံးထဲကိုဝငျသှားခဲ့ပွီး အသကျငငျငငျနဲ့ပွနျထှကျလာနိုငျခဲ့မှနျး သူသိလိုကျပါတယျ။
အမိုးခုံးကွီး ပိုပိုကွီးမားလာတာနဲ့အမြှ လူသားတှအေတှကျ အန်တရာယျပိုရှိလာမှနျး သိလာတဲ့အခါ လီနာနဲ့မိတျဆှအေမြိုးသမီးတဈခြို့ဟာ ဒီအမိုးခုံးထဲကို ဝငျပွီး အထဲကအဖွဈအပကျြတှကေို သှားလလေ့ာပါတော့တယျ။
ဇာတျလမျးထဲမှာပါတဲ့ ဆဲလျတှေ၊ အပငျတှေ၊ ထူးဆနျးဖွဈရပျတှနေဲ့ ဒီ Dimension ကွီးဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝတှကေို ထငျဟပျပွနသေလို အပျေါဆုံးက မေးခှနျးတှအေတိုငျးပဲ ဇာတျလမျးကိုတညျဆောကျပွသှားပါတယျ။
ဒီဇာတျကားမှာ ဗီလိနျလဲမပါသလို လူကောငျးလဲမပါပါဘူး။
သိပ်ပံအကျရှငျဇာတျကားနဲ့ဆငျပမေယျ့လဲ တကယျတော့ Symbollism တှေ သခြောသုံးပွထားတဲ့၊ဇာတျလမျးတဈကှကျ လှတျသှားရငျ ဇာတျရညျလညျဖို့ခကျသှားနိုငျတဲ့ Arthouse ဆနျဆနျရုပျရှငျကားတဈကားလို့ပွောရငျ မလှနျလောကျပါဘူး။
လီနာရဲ့ Relationship အခွအေနေ၊ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြတှေ၊ သူ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို စကားပွောထကျ အမူအရာတှနေဲ့ပဲ ပုံဖျောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတျကားရဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ ဇာတျလမျးကို အပျေါယံကွညျ့ရုံနဲ့နားလညျနိုငျမှာမဟုတျပဲ ပွောသမြှစကား၊ လုပျသမြှအပွုအမူတိုငျးကို သခြောအာရုံစိုကျ ကွညျ့မှသာ ဇာတျလမျးရဲ့အနှဈကို ရနိုငျတဲ့ကားမြိုးဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီဇာတျကားကို နားလညျသှားတာဟာ ကဗြာတဈပုဒျဖတျပွီး ကဗြာဆရာရဲ့ပေးခငျြတဲ့ Message ကို သိသှားတာနဲ့ တူပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဘဝမှာ နစေ့ဉျရုနျးကနျလှုပျရှားနရေတဲ့သူတိုငျး၊ ကိုယျ့ခဈြသူရညျးစားနဲ့ အဆငျမပွတေဲ့သူတိုငျး၊ စိတျညဈနတေဲ့သူတိုငျး ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီးရငျ အဆုံးသတျမှာစိတျထဲ တဈခုခုတော့ ကနျြရဈနမှော အသအေခြာပါပဲ။
Imdb 7.7 နဲ့ Rotten Tomatoes 87% ရရှိထားပွီး Star Wars fan တို့ရဲ့အခဈြတျော Natalie Portman, Thor: Ragnarok ကားထဲက Valkyrie အဖွဈပါဝငျခဲ့တဲ့ Tessa Thompson နဲ့အတူ Oscar Issac တို့ပါဝငျထားတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ ဒီကားကွညျ့ပွီး ဂိသထကျ ဂိနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
(ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ ကှီးအာကာပါ)
Running Time : 1h 55min
Option2VIP Links 900 MB
Option3VIP Links 380 MB
Option4usersdrive.com 900 MB
Option5usersdrive.com 380 MB
Clash of the Titans & Wrath of the Titans (Special Package)
Happy Halloween Scooby-Doo! (2020) 2020
Animal World (2018) 2018